mairie-antananarivo – Boriboritany I (CUA) : Nankasitraka ireo fikambanana mpitantana foto-drafitrasa sy mpanadio tanàna
Boriboritany I (CUA) : Nankasitraka ireo fikambanana mpitantana foto-drafitrasa sy mpanadio tanàna
Nanatanteraka sakafom-piraisana niaraka tamin’ireo « Association» na fikambanana izay mpitantana foto-drafitrasa eny anivon’ireo fokontany 44, teny amin’ny PK-O Soarano, ireo ekipa mpitantana ny Boriboritany Voalohany omaly. Izao no natao dia ny mba ho fankasitrahana ireo « Association » izay mpiaraka manao fanadiovana faobe amin’ny Boriboritany Voalohany isan-kerinandro, isaky ny talata.
Araka ny nambaran’ny lefitra faharoan’ny Delegen’ny Boriboritany Voalohany Andriamatoa Heriniaina RAZANADRAKOTO dia tsy voatery asa foana no hifanotronana fa tsara ihany koa raha mba misy ny fotoana toy izao, mba hampaherezana ireto « Association » mpitantana foto-drafitrasa ireto, izay tena hita tokoa fa miasa mafy ho an’ny vahoaka.
Raha tsy hilaza afa-tsy ireo mpitantana paompin-drano fotsiny hoy ity tompon’andraikitra ity dia manomboka amin’ny 1 ora maraina izy ireo dia efa manomboka manao ny asany ary tsy miala eo izy ireo raha tsy amin’ny 10 ora alina. Ny fiaraha-miasa eo anivon’ny Boriboritany Voalohany sy ireto « Association » mpitantana foto-drafitrasa ireto dia mbola mitohy hatrany satria ny tanjona dia iray ihany dia ny « Fanadiovana ny Tanàna ».
Nanamafy ihany koa ny tompon’andraikitra avy eo anivon’ity Boriboritany dia ny delegen’ny Boriboritany voalohany, Tiana Harilaza Raharivelo fa misokatra hatrany ho an’ny rehetra ny varavarana raha misy ny soso-kevitra na ny fitadiavana vahaolana mba hanatsarana ny asa. Mafy ny asa izay iandraiketan’ireto ekipa mpanadio Tanàna ireto koa manentana hatrany ny vahoaka ny Tompon’andraikitra avy eo anivon’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA), mba samy hitandro ny fahadiovana satria izay tsy mandoto dia efa anisan’ny manadio. Tsy adidin’ny Kaominina irery mantsy ny manadio Tanàna fa adidiko izao sy ianao.